सुपथ पसलबाट डेढ करोडको कारोबार – Chitwan Post
सुपथ पसलबाट डेढ करोडको कारोबार
नारायणगढ । दसैँ, तिहार, छठ पर्वको अवसरमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन प्रालि नारायणगढ शाखाले सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्यको पसलबाट एक करोड ६५ हजार ३३९ रूपैयाँ मूल्यबराबरको कारोबार गर्न सफल भएको छ ।
गत भदौ २३ गतेबाट सुपथ मूल्यको बिक्री कक्ष सञ्चालन गरेको कर्पोरेसनले ८९ हजार २३२ केजी चिनीबाट रू. ६४ लाख २४ हजार ७०४, ४५ हजार ७४९ केजी आयोनुनबाट रू. आठ लाख २३ हजार ४८२ र अन्य सामानबाट रू. २८ लाख १७ हजार १५३ र विभिन्न स्थानमा गरिएको घुम्ती सेवासहित एक करोड ६५ हजार ३३९ रूपैयाँबराबरको कारोबार गर्न सफल भएको हो ।
यस्तै, कात्तिक १७ गतेसम्म सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्यको बिक्री कक्षबाट गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष बढी सामान बिक्री भएको देखिन्छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन नारायणगढ शाखा प्रमुख बुद्धिविनोद दाहालका अनुसार गत वर्ष सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्यको बिक्री कक्षबाट जम्मा ४६ लाख ६८ हजार ३१ रूपैयाँमात्रै कारोबार भएको थियो ।
गत वर्षको तुलनामा यसवर्ष सामानमा भएको मूल्य वृद्धि र ग्राहकको चाप दुवै कारणले गर्दा यसवर्ष दोब्बरभन्दा बढी मूल्यबराबरको कारोबार भएको शाखा प्रमुख दाहालले बताए ।
गत वर्ष असोज १२ देखि कात्तिक २७ गतेसम्म सञ्चालन गरेको सुपथ मूल्यको बिक्री कक्षबाट १९ हजार ९६८ किलो चिनी र ३९ हजार ५८७ किलो नुन बिक्री भएको थियो । उक्त अवधिमा चिनीबाट १३ लाख ३८ हजार १९६ रूपैयाँ, आयोनुनको बिक्रीबाट सात लाख १२ हजार ५६६ रूपैयाँ र अन्य सामग्रीको बिक्रीबाट २५ लाख ९७ हजार २६९ गरी ४६ लाख ६८ हजार ३१ रूपैयाँ कारोबार भएको थियो ।
चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्यको बिक्री कक्ष आइतबारबाट बन्द भएको छ । तर, नयाँ मूल्यअनुसारको कारोबार भने वर्षभरि नै चलिरहने कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले आफ्नो बिक्री कक्षबाट आयोनुन र चिनीका साथै अन्य खाद्य सामग्री सहुलियत मूल्यमा बिक्रीवितरण गर्दै आएको छ ।
समग्रमा हेर्दा कर्पोरेसनले चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक १७ गतेसम्ममा कुल ११ करोड १० लाख १८ हजार ७९३ रूपैयाँ मूल्यबराबरको कारोबार गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको यही समयावधिमा कर्पोरेसनले जम्मा छ करोड ८२ लाख २८ हजार ३१७ रूपैयाँबराबरको कारोबार गरेको थियो ।
चितवनमा सोनाम गियरको शोरूम
ह्वीलचियर पाउँदा मन चङ्गा !